Barnaamijka sal-dhigashada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Barnaamijka sal-dhigashada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 10 2021
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay barnaamijka sal-dhigashada. Barnaamijka sal-dhigashada waa taageero qaabkeedu yahay hawlo iyo waxbarasho loogu talogalay ajaanibka dalka ku cusub qaarkood.
Waxaad akhrin doontaa wixii ku saabsan qofka ka qaybqaadan kara barnaamijka sal-dhigashada iyo nooca hawlaha ku jira.
Waxaa jirta taageero gaar ah lagana helo Xafiiska Shaqada oo loogu talogalay adigaaga dhowaan helay sharci degganaansho. Tani waxaa lagu magacaabaa barnaamijka sal-dhigashada. Hadafka barnaamijka sal-dhigashada waa in adigu aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u barato Iswiidhishka, u hesho shaqo oo u shaqayso lacag gaar kuu ah.
Maxaa loola jeedaa sal-dhigasho?
Maxaad u baahantahay si aad u dareento inaad sal-dhigatay gudaha bulshada ee halka aad ku nooshahay?
Hawlo noocee ah iyo taageero noocee ah ayaad heshaa adigu?
Hel shaqo wakhti nus ah inta lagu jiro wakhtiga aad ka qaybqaadanayso barnaamijka sal-dhigashada.
Haddii aad fasax waalidnimo wakhti buuxa gasho inta lagu jiro wakhtiga aad ka qaybqaadanayso barnaamijka sal-dhigashada waxaa jirta fursad ah in aad dib u sii wadato ka dib fasaxa waalidnimo.
Loogu talogalay adigaaga doonaya inaad wax barato.
Loogu talogalay adigaaga ku jira fasax waalidnimo.
Loogu talogalay adigaaga leh hoos u dhac awooda laxaadka ah.
Loogu taloglay adigaaga xanuusanaya.
Marka aad ka qaybqaadanayso barnaamijka sal-dhigashada waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlaha bil walba. Waa muhiim si aad u hesho tageero sax ah dhinaca jidka ku aadan shaqo ama waxbarasho, iyo si aad gunnadaada uga hesho Qasnadda Caymiska.
Xiriirada bogagga internetka ee kale:
Akhri wixi dheeraad ah oo gunnooyinka ka codso Qasnadda Caymiska boggeeda intarnatka.
Akhriso dheeraad ku saabsan magdhawga maalmeedka oo ku qoran bogga Xafiiska Shaqada.
Haddii aanad haysan aqoonta dugsiga sare oo Xafiiska Shaqada qiimeyso in taasi keentay in aanad heli karin shaqo markaas waa inaad wax barataa. Tani waxaa lagu magacaabaa waajibka waxbarasho.
Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka waxaa ku jira filimo leh macluumaad ku saabsan waajibka waxbarasho. Filimadan waxaa la helayaa iyagoo luqaddo kala duwan ah.
Maadooyinka cilmiga bulshada waa waxbarasho bilaash ah kuna saabsan bulshada iswiidhan looguna talogalay adigaaga dhawaan helay sharciga deganaansho ee Iswiidhan.
Waxaad koorsadan ku baran kartaa afkaaga hooyo, iswiidhishka fudud ama luqad kale oo aad taqaano. Waa degmada aad degantahay kuwa qaban qaabiya koorsadan. Koorasadan dhererkeedu waa ugu yaraan 100 saacadood.
Koorsadan waxay ku siinaysaa aqoon ku saabsan:
Mabaa'diida dimoqraadiyada ee aasaasiga ah
Sida bulshada iswiidhishku u nidaamsantahay
Nolosha maalinlaha ah ee waaqiciga ah
Qofkee tegi kara maadooyinka cilmiga bulshada?
Adigu waxaad dhigan kartaa koorsada hanuuninta bulshada haddii:
adigu aad dhawaan heshay sharci degganaansho
adigu aad ka qaybqaadato barnaamijka sal-dhigashada ee laga helo Xafiiska Shaqada
qof ka mid ah qoyskaaga dhawaan helay sharci degganaansho ama ka qaybqaato barnaamijka sal-dhigashada.
Waa maxay sababta ay tahay inaad u barato maadooyinka cilmiga bulshada?
Waxaad helaysaa aqoon ku saabsan xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga, dimoqraadiyada Iswiidhan iyo sida bulshada iswiidhishku u habaysantahay. Koorsadan waxay ku saabsantahay nolosha maalinle ee waaqiciga ah, tusaale ahaan arrimaha ku saabsan shaqo iyo waxbarasho, hoyga, caafimaadka iyo daryeelka bukaanka iyo caruurta iyo qoyska.
Ujeedada maadooyinka cilmiga bulshada waa in laguu sahlo inaad soo dhex gasho bulshada iwiidhishka.
Waxaad helaysaa caddayn marka aad dhamaysato waxbarashadan.
Sidee ayaad isaga diiwaan gelinaysaa maadooyinka cilmiga bulshada?
Haddii aad dhawaan heshay sharciga deganaansho kuna
qorantahay barnaamijka meelaynta ee Xafiiska Shaqada
waxaad la hadli kartaa hawl-wadeenkaaga jooga Xafiiska Shaqada in aad isu diiwaan geliso koorsadan.
Haddii aad xiriir la leedahay adeega arrimaha bulshada markaasi hawl-wadeenkaaga jooga adeega arrimaha bulshada ayaa kaa diiwan gelin kara koorsadan.
La xiriir degmada aad degantahay haddii aad doonaysid inaad dheeraad ka ogaato sida maadooyinka cilmiga bulshadu u shaqayso.